သင့်ရဲ့ ex နဲ့သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်လက်ခင်မင်နေသင့်သလား
သင့်ရဲ့ ex နဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်ဆံရေးဆိုတာ အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဓားတစ်ချောင်းလိုပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့တော့ သင့်ကိုယ်သင် ”ဒီနေရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေပေမယ့်လည်း ဒါဟာ အဆင်ပြေပါတယ်”လို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲ့ဒီ့ဆက်ဆံရေးကနေ သင်အမှန်တကယ်ရနိုင်တာဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ? သင့်ရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ချစ်သူဖြစ်ခဲ့စဥ်က အကြောင်းအရာတွေ၊ ကြင်နာမှုတွေနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေကို စားမြုံ့ပြန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ ချီးခြောက်ရေနူးဖြစ်နေမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။
သူကိုယ်တိုင်က သင်ဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝမှာ သူသင့်ကို လိုချင်တဲ့ဘယ်အချိန်မဆို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ချစ်သူလို့ဖြစ်လို့ရနိုင်သေးတယ်လို့ တွေးပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ relationship တစ်ခုမှာ သင်ဟာ relationship တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မထိုက်တန်သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြသနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုရှိတာက EX နဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေတာဟာ သင့်ရဲ့ နောက်ထပ်အချစ်သစ်ကို စမ်းသပ်ဖို့ ခက်ခဲစေပါလိမ်မ့ယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့် ex နဲ့ သူငယ်ချင်းမဖြစ်သင့်တဲ့တစ်ခြားအကြောင်းရင်း (၃) ချက်ကို မျှဝေထားပါတယ်။
၁။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ RS ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသလား?
သင်နဲ့ သင့် ex ကြား RS သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ မတရားမှုတွေ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြိုးကိုင်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန်အသုံးချခဲ့တဲ့ RS မျိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းအဖြစ်လက်ခံထားခြင်းဟာ ကျန်းမာစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ အဆိပ်အတောက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုလို့ ယူဆရတဲ့ အရာတွေအကြားမှုန်ဝါးနေတယ်ဆိုရင် သင်သူ့ကို စကားပြောတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။
-သူဟာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ လက်ရှိ RS ကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား
သင့်ကိုယ်သင် ပိုစိတ်တိုတတ်လာတယ်၊ စိတ်ပူတတ်လာတယ်လို့ ထင်လား
သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ညံ့ဖျင်းတယ်လို့ ထင်နေသလား
date တိုင်းမှာ သူကိုယ်တိုင်မလာမှာကြောက်လို့ dating တွေကို ရှောင်လေ့ရှိလား ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်ခြင်း (သို့) မညီညွှတ်ခြင်းဆိုတာဟာ သူနဲ့ ဆက်ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ဘဝမှာ အဆိပ်အတောက်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ personal ဘဝကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့် သုခချမ်းသာတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
၂။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိအချစ်သစ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလား
သင့်ရဲ့ EX နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေခြင်းဟာ နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ အချစ်သစ်အတွက် အတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် တော်တော်စိတ်ပျက်စရာပါ။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိချစ်သူကို ex နဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေပြီး တစ်ချိန်လုံးမအားမလပ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့တွေ့တဲ့ လူသစ်တိုင်းကို သူနဲ့တူဖို့မျှော်လင့်နေသရွှေ့ သင့်ကို အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားမယ့်လူတွေနဲ့ လွဲနေဦးမှာပါပဲ။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ္တရတွေ အစစအရာရာအားလုံးကို သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးကို ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ စကာပြောရတာဟာ အလေးမနေရသလိုပါပဲ။ အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ပါ။ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ရှာပါ။ သင့်ကို ဘုရင်မတစ်ပါးလို တန်ဖိုးထားလေးစားမယ့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပဲ ဆွဲဆောင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်ဟာ အတိတ်မှာပဲ တဝဲလည်လည်စဥ်းစားနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လက်ရှိအချိန်ကို အာရုံစိုက်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
၃။ ex နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေဆဲဆိုတာ လက်ရှိချစ်သူကို ပြောပြထားလား
တကယ်တော့ ex နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေရခြင်းက အားနည်းချက်တစ်ချို့ရှိနေခြင်းပါပဲ။ သင် ex နဲ့ လမ်းခွဲပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့တယ်။ တစ်ညမှာ သင့်ရဲ့ ex ကို သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလို့ပြောပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိချစ်သူက သင့်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးလားဆိုတာမျိုး အသေအချာစဥ်းစားတော့မှာပါ။ အမျိုးသားအများစုဟာ ဒီလိုထင်လိုက်တာနဲ့ တစ်သတ်မတ်တည်းယုံကြည်လိုက်ကြပါတယ်။